मुखासे scars उन्मुक्ति कसरी: अनुहार मा स्थिर स्थलहरू? – Jannah समाचार
घर/मुखासे/मुखासे scars उन्मुक्ति कसरी: अनुहार मा स्थिर स्थलहरू?
0 264मिनेट पढ्न
ब्लग Ilona Pouzin
महिला – सृष्टिको प्रकृति,
यसको बलको स्रोत रचनात्मकता छ.
को दाग हटाउन चाहनुहुन्छ, scars र मुखासे scars आफैलाई पछि?
नमस्कार, ब्लग को प्रिय पाठकहरु!
हामी पोस्ट-मुखासे को विषय मा हाम्रो कुराकानी जारी छौँ (pustules को नतिजा). आज, हामी भन्नेछु, घर मा मुखासे scars उन्मुक्ति कसरी र गर्न नुस्खा सबैभन्दा प्रभावकारी मास्क साझेदारी. र, हामी रहस्य प्रकट छौँ, मेकअप संग कमीकमजोरी लुकाउन कसरी.
हाम्रो लेखले असिद्धता हटाउन मदत गर्नेछ! हाम्रो साथ रहन र पढेर आनन्द.
को दाग र scars छुटकारा रही को सबै भन्दा वफादार तरिका
पोस्ट-मुखासे घर एक मास्क कसरी बनाउने?
छाला को सुनिंनु सधैं अप्रिय भावना हामीलाई कारण छ. विशेष गरी, तिनीहरूले त्यसो गर्दा परिणाम र छाला मा scars वा indentations को रूप मा एक "रिमाइन्डर" पछि छोड्न. हामी उहाँलाई छुटकारा गर्न प्रयास. आज, हामी तपाईंलाई सुझाव साझेदारी हुनेछ, जो तपाईं घर मा scars हटाउन मदत गर्नेछ.
यो जस्तो लाग्न सक्छ, कि आत्म-सफा पोस्ट-मुखासे - यो असम्भव छ. तथापि, समय प्रक्रिया प्रदर्शन गर्न सुरु गर्न भने - सबै सम्भव छ, ताजा scars धेरै सजिलो ल्याउन किनभने!
scars कम को प्रभावकारी तरिकामा:
पोस्ट-मुखासे कस्मेटिक मोम संग उत्कृष्ट संघर्ष. आवेदन विधि अति सरल छ: पदार्थ पिघलने, pointwise लागू र सुकाएपछि हटाइएको. त्यसपछि एक मइस्चराइजिंग क्रीम लागू गर्न निश्चित हुन.
तपाईंले यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ .
विरंजन - उमेर स्थलहरू हटाउन ठूलो तरिका, scars हल्का. तपाईं विशेष कस्मेटिक्स प्रयोग गरेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, र मास्क प्रयोग, तपाईं सजिलै घर मा बनाउन सक्नुहुन्छ.
व्यञ्जनहरु क्रीम, Scrubs र मास्क तपाईं यो लेख को अन्त्यमा पढ्न सक्नुहुन्छ. विरंजन पनि छाला टोन बाहिर पनि मदत गर्छ, यो चिकना बनाउने, मखमली.
कस्मेटिक तेल संग मालिश. अनुहार मालिश को लाभ endlessly कुरा गर्न सक्नुहुन्छ! आखिर, यो बुढ्यौली धीमा मदत गर्छ, यो dermis टन, छाला smoothes. कस्मेटिक तेल, तपाईं ईथर 1-2 थोपा थप्न सक्नुहुन्छ.
उदाहरणका लागि: 1 चम्मच बादाम तेल र2चिया रूख तेल घटेको, मसलाको, Rosemary. चिटिक्क आन्दोलनहरु मालिश रेखाहरू भन्दा मिश्रण RUB.
तेल को संरचना, तपाईंलाई थाहा रूपमा, धेरै उपयोगी, पदार्थ, को ईथर चयापचय बढाउने शामिल कि, कक्षहरू र मिलेका epidermis को पुनर्जनन बढाउने.
Darsonval उपकरण - तपाईं दाग हटाउन मदत गर्नेछ. कारण थोरै बिजुली झटके गर्न, उहाँले ध्यान dermis काम गर्दछ. दलहन, नलिका मार्फत, को epidermis आउन. त्यसपछि जीवाणुहरु हत्या गर्दै, सुनिंनु छोड्दा.
Darsonval पनि रक्त accelerates. व्यवस्थित प्रयोग scars को निशान कम, scars. पनि पुरा रूपमा dermis अवस्था सुधार, पुनर्जनन को प्रक्रिया सुरु, कोलैजेन को उत्पादन क्रियाशीलता, elastin, gilaurona.
क्रीम संग संयोजन मा, लोशन, Scrubs - तपाईं एक अद्भुत प्रभाव प्राप्त हुनेछ! मौका खरीद उपकरण Darsonval .
यो साइडर सिरका र कागति संग लोशन बनाउन उपयोगी छ. यो मात्र होइन whitens, तर पनि Tissues को तीव्र निको बढावा, पुनर्जनन accelerates, को epidermis smoothes, यो लोच दिन्छ.
तपाईंको भिटामिन लिन, विशेष गरी, एक र एस. मा पाठ्यक्रम2महिनाको. तिनीहरूले छाला अवस्था सुधार गर्न मदत. पनि, पर्याप्त पानी पिउन.
यूवी रेज तपाईंको छाला सुरक्षित -inache गाढा स्थलहरू गठन हुनेछ, कि, कुनै हालतमा, उपस्थिति सजाउनु. विशेष गरी, यदि तपाईं एसिड peels के वा सुन्तला को आवश्यक तेल प्रयोग, कागति, अंगुर दाख.
दृश्य, सुझावहरू धेरै सरल छन्! उपचार को सामयिक सूत्रपात - सफलता को लागि महत्वपूर्ण छ, सहमत? घर मा, तपाईं पोस्ट-मुखासे को छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन्.
तपाईं विद्यमान चिकित्सकीय एजेन्ट प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन स्टोर औषधि पसल ब्रान्डहरु उल्लेख Pharmacosmetica .
को पाठ्यक्रम, एक गम्भीर मामला यदि: गहिरो scars, unhealed सुनिंनु छ, र उपचर्म शिक्षा - यो एक त्वकरोग भ्रमण गर्न लायक छ. प्रभाव मात्र epidermis निको गर्नुपर्छ, सुनिंनु र suppuration को कुनै देखिने संकेत.
एक बनाउन-अप को रहस्य, कि तपाईं scars लुकाउन मदत गर्नेछ:
छाला प्राइमर मा लागू, यो राहत पंक्तिबद्ध मदत गर्नेछ.
थप, एक विशेष ब्रश वा स्पन्जले लागू कंसीलर प्रयोग. कोटिंग बनाउन आवश्यक छैन पनि बाक्लो छ! यो pores clog र अवस्था बढन सक्छ.
क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूमा, कंसीलर लागू, रुप बदल्नु गर्न तिनीहरूलाई मदत गर्नेछ
राता मद्दत हरियो कंसीलर लुकाउन, यसलाई पूर्ण disguises छ. लागू यो एक ब्रश संग डटेड गर्नुपर्छ.
पाउडर प्रयोग मेकअप समाधान.
शासन सम्झना: यो आँखा वा ओठ आवंटित गर्न आवश्यक छैन. यो eyebrows मा एक सानो उच्चारण गर्न राम्रो छ, ओठ लिपस्टिक वा चमक छाया nyudovogo लागू गर्नुपर्छ, आँखा अलि कालो पेन्सिल ल्याउन सक्छ.
सधैं गुणस्तर प्रयोग, परीक्षण कस्मेटिक्स , जो एलर्जी कारण छैन.
त्यहाँ उत्कृष्ट सुविधाहरु छन्, तपाईंले घरमा खाना पकाउन गर्न सक्ने. तिनीहरूले तपाईंलाई खुजली राहत मदत गर्नेछ, र रक्त र पुनर्जनन बढाउने. तपाईं पनि नोटिस हुनेछ, छाला सौन्दर्य र स्वास्थ्य संग चमक हुनेछ.
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सम्झना - मास्क बनाउन, बोक्रा र क्रीम गर्नुपर्छ नियमित लागू, अन्यथा प्रक्रिया को परिणाम छैन हुनेछ.
तपाईं रोगी हुनुपर्छ, रूपमा पर्याप्त कोलैजेन उत्पादन गर्नुपर्छ, जो क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा भर्न सक्नेछन्. कस्मेटिक उत्पादन मात्र scars छुटकारा मदत गर्नेछ प्राप्त, तर पनि मुखासे रोक्न.
ethers को वाहेक संग माटो को मास्क छाला अवस्था सुधार गर्न मदत, पुनर्जनन बढाउने. यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, कोलैजेन र elastin उत्पादन. आखिर, यी दुई तत्व हाम्रो छाला को लोच लागि जिम्मेवार छन्.
esters (Rosemary, लैवेंडर, manuka, कागति) मात्र रक्त बढाउने, तर पनि पोस्ट-मुखासे को तीव्र निको प्रचार.
माटो - softens, यो pores र moisturizes शुद्ध पार्छ. सेतो वा हरियो माटो मा तेल थप्न बिस्तारै गर्न - पर्याप्त 1-2 थोपा हुनेछ.
मह र दालचिनी - एक नरम dermis बनाउन, रेशमी, पोषण र moisturize. मह - एउटा अचम्मको उत्पादन, जो रोगहरु को एक नम्बर देखि लाभ र अक्सर कस्मेटिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ. दालचिनी - छाला माथि warms, यो चयापचय गति.
कस्मेटिक बरफ - यो तयार गर्न धेरै सजिलो छ! यो साग लिन आवश्यक छ, सूक्ष्मता यो काट्नु (वा ब्लेंडर मा काट्नु) उम्लिरहेको पानी खन्याउन, यो बनाउँने गरौं र बरफ लागि विशेष प्रकारका मा खन्याउन. धेरै बिहान र साँझ बरफ संग अनुहार हटाउन उपयोगी. बिहान - यो प्रक्रिया तपाईं मज्जा, साँझ - काम पछि थकान र तनाव राहत.
हाइड्रोजन पेरोक्साइड संग Badyaga - प्रभावकारी उपाय, जो छाला पंक्तिबद्ध मद्दत गर्छ, सुनिंनु हटाउनु र खुजली relieves. नुस्खा मास्क लगभग को: 1 माटो चम्चा, 1 चम्चा र concoctions4हाइड्रोजन पेरोक्साइड को घटेको 3%.
सबैभन्दा तपाईं पोस्ट-मुखासे को मास्क मनपराएका चयन गर्नुहोस् र हरेक दिन यो गर्न. यसलाई आफ्नो हेरविचार दल्नु बरफ र खुट्टाफिन मा समावेश गर्न लायक पनि छ. जटिल उपचार र सावधान छाला हेरविचार तपाईं मुखासे को संकेत सामना गर्न मदत गर्न.
जैविक कस्मेटिक्स प्रयोग , जटिल भिटामिन crows .
यदि, 2-3 महिना पछि तपाईं देखिने परिवर्तन देख्नु हुनेछ, तपाईं एक त्वकरोग वा ब्यूटिशियन परामर्श गर्नुपर्छ. आफैलाई हेरचाह, छाला को लागि सबै समय ख्याल - र त्यो धन्यवाद हुनेछ!
सङ्कलन मुखासे सबै विषय चिन्ता, हामी आफ्नो उपस्थिति को कारण सिक्न छौँ, तिनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्न र जो मद्दत लागि कल गर्न.
अन्तमा, आज तरिका संग भेट, घर मा पोस्ट-मुखासे कसरी जीत. व्यञ्जनहरु मास्क आफ्नो आत्म-हेरविचार विविधता र छाला चिल्लो र रेशमी बनाउन.
सम्झना - तपाईं सुन्दर छन्!
ब्लग सदस्यता लिन, सौन्दर्य को दुनिया बाट सबै नयाँ उत्पादनहरु को abreast राख्न, स्वास्थ्य र रचनात्मकता.
आफ्नो साथीहरूसँग जानकारी साझेदारी, यो विषय धेरै गर्न चासो छ किनभने.
तपाईं Ilona थिए देखि
यस लेखमा तपाईं उपयोगी थियो भने, यसलाई बुझ्न - दिल प्रकाश)))
मुखासे लागि लोक उपचार - 10 घर लागि प्रभावकारी व्यञ्जनहरु
घर मा आफ्नो अनुहार मा मुखासे को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी
रातो स्थलहरू - आफ्नो अनुहार मा pimples को को निशान कसरी हटाउने, scars
मुखासे पछि scars उन्मुक्ति कसरी?
blackheads (स्कोर) – के देखा देखि, अनुहार को छुटकारा प्राप्त कसरी र फिर्ता, उपचार विधि